Kdenlive 20.12 inosvika nemhedzisiro mhedzisiro uye zvakawanda zvinogadziriswa | Linux Vakapindwa muropa
Kdenlive 20.12 inosvika nemhedzisiro mhedzisiro uye zvakawanda zvinogadziriswa
Mumavhiki apfuura, mumwe wangu Diego akanyora zvinyorwa, senge izvi y izvi, maakataura nezve vhidhiyo edhita. Mavari akataura zvinhu nezve KDE imwe, inoita kunge yakave nenguva dzakanaka, asi iyo inoedza kugadzira ivhu rakarasika. Izvo Zvita 2020 Zvikumbiro zve KDE zvave zviripo kwemavhiki mashoma, asi hazvina kusvika nezuro apo chirongwa ichi chakaburitsa Kdenlive 20.12, uye inouya nenhau dzinonakidza kwazvo.
Tatova padhuze ne KDE Kunyorera 20.12 kuburitsa chinyorwa Isu taigona kuona kuti Kdenlive 20.12 yakaunza 370 shanduko, asi mune yakakura rondedzero uye isina mutauro unonakidza zvakanyanya zvakaoma kuwana izvo zvakakosha. Zviri nyore pane chinyorwa chepamutemo, senge iyo vakaburitsa nezuro Zvita 21 uye kwavanotowedzera mifananidzo inofamba. Ini pachangu, ndinofunga chinonyanya kufadza ndeche Eco Mbiru inoshanda, iyo inowedzera kusanzwisisika kumashure kubva pane chinyorwa clip kuti iite yakatwasuka vhidhiyo kutaridzika zvakanaka mumamiriro ezvinhu, sezvaungaona mumusoro wekutora (kurudyi).
1 Kdenlive 20.12 Zvinoratidza
2 Iye zvino inowanikwa mune akasiyana mafomati
Kdenlive 20.12 Zvinoratidza
Shanduko dzakafanana kumatraak akasiyana. Nemhedzisiro iyi, tinogona kusevha nguva nekuwedzera shanduko imwe chete kumatiraki maviri kana anopfuura.
Mhedzisiro yacho yakarongedzwa muchikamu chine chimiro chakajeka uye nyore kunzwisisa, izvo zvinovandudza chiitiko.
Inoenderana nemhedzisiro, kuvimbika kwayo uye kugadzikana zvakagadziridzwa.
Mbiru Echo mhedzisiro (Shongwe Echo), zvinova ndizvo zvaunoona mumusoro wekutora uye, sekutsanangura kwatinoita, inoshanda kuzadza vhidhiyo yakatwasuka iyo nhema nhema iyo inosara patinowedzera vhidhiyo yakatwasuka. Iyo yekuzadza chikamu cheakawedzera uye akasviba vhidhiyo.
Iyo yekuzadza goho mhedzisiro ikozvino inogona kugadzirwa pama keyframes.
Nyowani VR 360 uye 3D mhedzisiro ye stereoscopic 360º kana 3D mifananidzo.
Nyowani vhidhiyo yakaenzana kuti igadzirise kupenya, kusiyanisa uye kuzadza kwemufananidzo.
Nguva yacho yakagamuchira shanduko yekuvandudza.
Kugona kugonesa / kuremadza akajairwa ematepi zvigunwe kubva kunzira yemusoro.
Iye zvino matinji mazhinji anogona kubviswa kamwechete.
Iye zvino inowanikwa mune akasiyana mafomati
Kdenlive 20.12 iri inowanikwa paFlathub kubva pazuva rimwechete rekumisikidzwa kwe KDE Zvishandiso 20.12, asi isu hatigone kutaura zvakafanana kune iyo Snap vhezheni iyo ichakamira mune yaApril 2020 vhezheni (ay, Canonical…). Pane rimwe divi, unogona kurodha yako AppImage kubva Iyi link kana kuwedzera dura rekugovera rinoshandisa APT, yatinofanira kunyora zvinotevera:
Kana iwe uchida vhezheni dzezvakachengetedzwa zvekuparadzirwa kwako kweLinux, iwe uchafanirwa kumirira kwechinguva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Kdenlive 20.12 inosvika nemhedzisiro mhedzisiro uye zvakawanda zvinogadziriswa
Shanduko DJ: iyo app yeavo vane mweya weDJ
Maitiro ekuisa linuxero uye wakasvinudzwa muti weKisimusi mune iyo terminal yeako anoshanda system